‘मलाई कोरोना भए मुख्यमन्त्री र सामाजिक मन्त्रीलाई सार्छु’ – Yug Aahwan Daily
‘मलाई कोरोना भए मुख्यमन्त्री र सामाजिक मन्त्रीलाई सार्छु’
युग संवाददाता । १८ जेष्ठ २०७७, आईतवार २०:१३ मा प्रकाशित
1827 पटक हेरिएको
दैलेख, १८ जेष्ठ ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा युवा सांसद शुशिल थापाले अबको एक महिनामै कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना सम्बन्धमा जनप्रिय काम नगरेमा सरकारबाट गलत्याउने बताएका छन् । दैलेखको क्यारेन्टीन र आइसोलेसन कक्षमा रहेका सम्पूर्ण दैलेखीलाई सडकमा उतारेर कर्णाली प्रदेश सरकारलाई घेरा हाल्दै प्रदेश सरकारको कार्यकक्षलाई नै आइसोलेसन बनाईदिने रेडियो धुब्रतारा एफ. एम. को एक अन्तरवार्तामा उनले आक्रोश पोखेका थिए ।
यस्तो कारोना माहामारीको बेला पनि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णालीबासीको अबस्था बारे धेरै चासो नदिएको उनको आरोप छ । उनले भने यदि मलाई कोरोना भएछ भने सुरुमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई सार्छु । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र दुल्लु नगरपालिकाका ३५ बर्षका पुरुषको कारोनाबाट मृत्यु भएपछि उनले आक्रोश पोख्दै भने ‘दैलेख जिल्लाबाट भारतमा जाने अन्य जिल्लाहरुको तुलनामा कर्णाली प्रदेशकै मानिसहरु धेरै भएकाले दैलेख जिल्ला बढी जोखिममा छ ।’ कोरोनाको जोखिम सबैभन्दा बढी दैलेख भएको पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि स्वास्थ्य सामाग्री, व्यवस्थापन र अन्य सहयोगमा दैलेख जिल्लालाई विभेद गरेको प्रदेश सांसद थापाले बताएका छन् ।
उनले दुल्लु नगरपालिकाको खातामा ७० लाख पठाइएको जानकारी गराए । पालिका स्तरीय समिति बनाई कारोनाबाट मृतकका छोराछोरीलाई राहात दिने बताए । भारतबाट आउने जिल्लाबासीलाई व्यवस्थित तरिकाले ल्याउनुको साथै क्यारेन्टीनलाई मजबुत बनाउनेसमेत उनले प्रतिबद्धता गरे ।
दैलेखका सांसदलाई सभा प्रवेशमा रोक
कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा दिनरात खटिएका सांसदलाई एक साता होमक्वारेन्टाइनमै बस्न आग्रह गर्दै प्रदेश सभामा प्रवेश रोक लगाइएको जनाइएको छ । सभामुख राज बहादुर शाहीले आइतबार फोन सम्पर्क गरी दुवै प्रदेश सदस्यहरुलाई एक सातासम्म प्रदेश सभामा नआएर होम क्वारेन्टाइनमा बसिदिन आग्रह गरेका थिए । ७ दिन होम क्वारेन्टाइन बसेपछि कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै प्रदेश सभामा सहभागि गराइने जनाइएको छ । दुवै सांसदलाई गेटमै रोक्ने गरी सुरक्षाकर्मीलाई सर्कुलर गरिएको जनाइएकोछ ।